Tarot kwiHuesca | Ukujongana ubuso ngobuso kunye nokufunda incwadi kwi-Intanethi | 2019
Zininzi iimeko apho singenayo ingcaciso kwaye inokwenzeka nanini na ebomini bethu. Kwezi ntlobo zamaxesha, ngamanye amaxesha kunzima ukucamngca ngokucacileyo kwaye uthathe isisombululo esifanelekileyo sokujongana nengxaki ngesisombululo.
1 I-Tarotist kunye neMboni ngaphandle kweKhabhinethi eHuesca
2 Yintoni umfundi weTarot?
3 Yintoni eyahlula ababonisi bethu abaziingcali eHuesca?
4 I-Clairvoyance eHuesca, ii-hits eziqinisekisiweyo
I-Tarotist kunye neMboni ngaphandle kweKhabhinethi eHuesca
Wethu Umfundi we-tarot kunye nemboni eHuesca yingcali kule klasi yamatyala, emva kwamashumi eminyaka exhasa kwaye akhokele nabani na ocela umnxeba okanye iseshoni yobuso ngobuso naye nangasiphi na isizathu.
Yintoni umfundi weTarot?
Umfundi we-tarot ngumntu okwaziyo jonga ngokudlulileyo, ngoku nakwixesha elizayo ngokusebenzisa ulwazi olufunyenwe ngokwendalo kunye nolwazi olufunyenwe kunye nokuhonjiswa ngexesha leeseshoni zesikhokelo zokomoya kunye nokufundwa kwetotot.
UCarla, wethu umdlali we-tarot oqeqeshiweyo eHuesca, inokukukhokela ukuze uthathe isigqibo esisiso xa ujongene nengxaki ongaziboniyo unako ukujongana nayo. Rhoqo kunzima kakhulu ubuso nobuso kunye noloyiko, kwaye zezi ntlobo zeemeko apho inkxaso yomntu okwaziyo ukwahlula indlela imeko nganye eza kukhula ngayo ibalulekile.
Ukwandisa ukungonwabi rhoqo sisisombululo esingasithathiyo, nangona siyayiqonda into yokuba iintlungu zethu azipheli nokuba ixesha lihamba njani. Kukule ngqiqo ke ukuba yethu Umfundi we-tarot wabucala eHuesca inokukukhomba kwicala elifanelekileyo, ikukhokele ngothando kwaye ngononophelo kwi Ukwenza izigqibo ezilula ngokusebenzisa i-clairvoyance, ikubonisa ukuba ingaliphi ikamva ukuba uphinde uqale eyona ndlela ibalaseleyo yezo ziboniswe phambi kwakho.
Yintoni eyahlula ababonisi bethu abaziingcali eHuesca?
Wethu tarotista ngaphandle kwekhabhinethi eHuesca se Igxile kufundo lwetarot uhlobene ne uthando, la ubuhlobo, i msebenzi okanye negocios. A ngokusebenzisa i-clairvoyance ngefowuni, UCarla unokukunceda ugxile kwizinto eziyimfuneko. Ukuxabisa into elungileyo kunye nokungavumi okungalunganga. Ukufumanisa ukuba yeyiphi imiphumo eya kuba nayo kwixesha elizayo ukuthatha isisombululo esingalunganga.
Ukufumana uthando, ukufumana umsebenzi, ukufumana ubuhlobo kunye nokuphumelela kwishishini zezinye zezizathu zokuba kutheni zonke iintlobo zabantu zinceda imboni yethu e-Huesca ukuba ifumane impendulo yemibuzo Yayingumphambili wazo. Nokuba uchonga nayiphi na le micimbi ingasentla okanye ukuba ingxaki yakho iyinto enzima ngakumbi, uCarla uyakwazi ukukunceda.
I-Clairvoyance eHuesca, ii-hits eziqinisekisiweyo
Las ukufundwa kwetarot kwimboni yethu yabucala eHuesca, Itolikwe ngendlela efanelekileyo nguCarla, baya kukuvumela ukuba ufezekise ukukhanya ekupheleni kwetonela elingakhange lenze nto ngaphandle kokuzahlula nokuba usondele kangakanani na.
Fumanisa ukuba ungazifumana njani, ungasusa njani amathandabuzo akho kwaye uqhubeke kanjani nobomi bakho emva kokwazi iimpendulo ebezisindile ukuza kuthi ga ngoku Ukudibana kwetarot Umboni wethu oqeqeshiweyo eHuesca.